Tantara: Vehivavy Roa Nahery Fo - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
I Jabina no mpanjakan’i Kanana tamin’izany fotoana izany. Nanana kalesy ﬁadiana 900 izy. Nahery aoka izany ny taﬁny ka Israelita maro no voatery nanjary mpanompon’i Jabina. I Sisera no ﬁlohan’ny taﬁk’i Jabina mpanjaka.
Indray andro i Debora dia naniraka nampaka an’i Baraka Mpitsara ary niteny taminy hoe: ‘Hoy i Jehovah: “Makà lehilahy 10 000 ary ento mankany amin’ny Tendrombohitra Tabora izy ireo. Hoentiko any i Sisera hihaona aminao. Hanome anao fandresena azy sy ny taﬁny aho.”’
Novonoina koa i Jabina tamin’ny farany, ary dia nanana indray ﬁadanana vetivety ny Israelita.
Inona no tombontsoa nananan’i Debora, ary inona avy no taﬁditra amin’izany?
Inona no hafatr’i Jehovah nampitain’i Debora tamin’i Baraka Mpitsara, rehefa nihantsy ady azy i Jabina Mpanjaka sy Sisera, ﬁlohan’ny taﬁny? Iza anefa no nolazainy fa hahazo voninahitra avy amin’izany?
Inona no azon’ny vehivavy kristianina ianarana avy amin’ny ﬁnoana sy herim-po nasehon’i Debora sy Jaela? (Mpits. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Ohab. 31:30; 1 Kor. 16:13)